केही हुन्न भन्दाभन्दै बच्चा गयो, अनि पाठेघर र मिर्गौला
हाम्रा अस्पताल, हाम्रो उपचार
सागर चन्द, पवन बराइली काठमाडौं, १२ असोज
सबै कुरा ठीक भएको भए ‘दुई सन्तान ईश्वरका वरदान’ भनाइ सावित हुने थियो परियार दम्पतीको जीवनमा । अमर परियार र भूमिका सापकोटा (परियार) दोस्रो बच्चाको पर्खाइमा थिए ।
पहिलो बच्चा १३ वर्ष पुगिसकेको थियो । तर, भनेजस्तो, सोचेजस्तो सबै कुरा ठीक भएन । त्यसैले त भदौ २० यता अस्पतालमै बास भएको छ, परियार दम्पतीको ।
शिलापत्रले परियार दम्पतीलाई सिनामंगलस्थित शिक्षण अस्पतालमा भेट्दा (शनिबार ११ असोज) उनीहरू अस्पताल बसेको २३ दिन भइसकेको थियो ।
जीवनमरणको दोसाँधमा भूमिका सापकोटा (परियार) शिक्षण अस्पतालको मेडिकल इन्टेन्सिभ केयर युनिट (एआईसीयू) मा छिन् ।
सापकोटाका श्रीमान् अमर श्रीमती ठीक हुने प्रतीक्षामा छन् बाहिर । अस्पतालदेखि अस्पताल दौडिँदैछन् डाक्टरको खोजीमा । रगतको खोजीमा ब्लड बैंक दोडिँदैछन् ।
प्रत्येक पटक डाक्टरलाई देख्दा आशाको दृष्टिले हेर्छन् र सोध्छन, ‘डाक्टरसा’ब के भयो ? के हुन्छ अब ?’
‘आत्तिनु पर्दैन ठीक हुन्छ,’ नियमित जवाफ दिन्छन् डाक्टर ।
छटपटिन्छन् अमर । ‘यतिका दिन ठीक भएन । अस्पताल फेर्दा पनि ठीक हुँदैन !’ मोबाइलमा श्रीमतीको तस्वीर हेर्छन् र कल्पिन्छन, ‘यसरी नै हाँस्ने कहिले हुन्छ होला ?’ छटपटी र वेचैनीमा २३ दिन बितिसके । अझै कति दिन बित्ने हुन् ?
धादिङका अमर परियार र भूमिका सापकोटाले १५ वर्ष अगाडि विवाह गरे । अन्तरजातीय विवाह समाजले स्वीकार गरेन । अमर सानै हुँदा अमरका बाबुआमाको निधन भइसकेको थियो । सामाजिक प्रताडना सहन नसकेपछि श्रीमतीसहित अमर काठमाडौं आए ।
अंशवण्डा गर्दा आफ्नो भागमा परेको जमिन बेचेर श्रीमतीसहित कुवेत गए । श्रीमान–श्रीमतीले कुवेतमा ३ वर्ष सँगै काम गरे । श्रीमतीसहित कुवेत गएका अमरसँग कुवेतमा श्रीमानश्रीमतीसँगै बस्न पाउने रेसिडेन्सियल कार्ड पनि छ ।
३ वर्ष कुवेतमा ‘कुक’ काम गरेपछि भूमिका दुई वर्ष अगाडि नेपाल फर्किइन् । अमर भने कुवेतमै बसे । भूमिका काठमाडौं, कपनमा बसेर जेठी छोरी पढाउन थालिन् । बीच–बीचमा अमर पनि नेपाल आइरहे । पहिले सन्तान ठूलो भइसकेपछि परियार दम्पतीले दोस्रो सन्तान जन्माउने निर्णय गरे ।
गर्भवती भूमिका कपनबाट निरन्तर गर्भ जाँच गराउन थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति गृह आउन थालिन् । हरेक पटकको जाँचमा डाक्टरले ‘सबै ठीक छ’ भने । डाक्टरले ठीक छ भनेको कुरा भूमिका कुवेतमा रहेका आफ्ना श्रीमानलाई सुनाउँथिन् । अमर पनि खुशी हुन्थे ।
डाक्टरले सुत्केरी हुने मिति तोके, ‘भदौ ११’
डाक्टरले मिति तोकेपछि कुवेतबाट बिदा लिएर तोकेको मितिभन्दा एक महिनाअगाडि अमर नेपाल आए ।
डाक्टरले तोकेको मितिमा थापाथली अस्पताल पुगे ।
‘डाक्टरले दिएको डेटमा अस्पताल गयौं तर, डाक्टरले भदौ २० गते आउनू भने,’ सिनामंगलस्थित शिक्षण अस्पतालको क्यान्टिनमा अमरले सुनाए ।
बेडमा राखेपछि डाक्टरले चेक गरेर सबै नर्मल छ भने । त्यसपछि एक जना विदेशी जस्तो देखिने नर्स हुन् कि डाक्टरले मलाई गुड लक भनिन् ।’
त्यसपछि भदौ २० (शुक्रबार) मा थापाथली अस्पताल पुगे परियार दम्पती । डाक्टरले पहिले तोकेको मितिभन्दा १० दिन पछि अस्पताल पुग्दा पनि बेड पाइएन । बिहान १० बजे अस्पताल पुगे पनि साँझ ५ बजे मात्रै भूमिकाले बेड पाइन् ।
‘दिनभर अस्पतालको प्रतीक्षालयमा छटपटिँदै बस्नुपर्यो,’ अमर सुनाउँछन्, ‘बेडमा नराखी हेर्न मिल्दैन भने डाक्टरले ।’
साँझ बेडमा राखिसकेपछि एक जना विदेशी नर्सले आफूलाई गुड लक भनेको सम्झिन्छन् अमर, ‘बेडमा राखेपछि डाक्टरले चेक गरेर सबै नर्मल छ भने । त्यसपछि एक जना विदेशी जस्तो देखिने नर्स हुन् कि डाक्टरले मलाई गुड लक भनिन् ।’
अमर भन्दै गए, ‘शुक्रबार यत्तिकै बित्यो । बेला–बेला डाक्टर आउँथे हेर्थे र टाउको हल्लाउँदै जान्थे । शुक्रबार राति पनि व्यथा नलागेपछि अमरले नर्सलाई भेट्न खोजे । तर, नर्सले अमरलाई उल्टै राति बत्ती किन बालेको भन्दै थर्काइन् ।
शुक्रबार राति पनि व्यथा लागेन । शनिबार बिहान ९ बजे व्यथा लाग्ने औषधि दिइयो । बिहान औषधि दिएकोमा राति १० बजे मात्रै व्यथा लाग्न सुरू भयो । राति त अत्ति रगत बग्न थाल्यो । रगत धेरै बग्न थालेपछि नर्सले सुई लगाए । सुई लगाएपछि रगत बग्न रोकियो ।
सुई लगाएपछि नर्सले तातो खानेकुरा खान दिनुहोस् भने । तर, तातो झोल खुवाएपछि बान्ता भयो । बान्ता भएको कुरा अमरले नर्सलाई सुनाए । नर्सले ‘केही हुँदैन, चिन्ता नगर्नुहोस्’ भने ।’
‘शनिबार राति पनि नर्सले राम्रोसँग केयर गरेनन् । राति बोलाउन गयो, नर्सहरू त बत्ती निभाएर मोबाइल खेलाएर बस्छन्, आउँदैनन् । बत्ती बाले पनि गाली गर्छन्,’ नर्सले देखाएको व्यवहार सम्झिँदै भन्छन् ।
नर्सको व्यवहारले अमर चिन्तित भए । आक्रोशित भए । शनिबारको रात बित्यो । आइतबार बिहान ५ बजेतिर भूमिकाको अवस्था नाजुक देखियो । ‘बिहान ५ बजे त उनी (भूमिका) नीलो, कालो देखिइन् ।
त्यसपछि अताल्लिँदै नर्सलाई बोलाउन गए । तर, नर्सको जवाफ सुनेर अमर दंग परे, ‘तपाईं डाक्टर कि हामी ?’ नर्सहरूले अमरलाई थर्काउँदै सोधे, ‘न आत्तिनुहोस्, केही हुँदैन भनेको होइन ?’ तर, अमरलाई भने चिन्ता पर्न थाल्यो । १३ वर्षको अन्तरालमा बच्चा जन्माउँदा केही अप्ठेरो हुन्छ कि भन्ने मनमा पर्यो अमरलाई ।
आइतबार बिहान ८ बजे गर्भको बच्चा स्वाभाविक स्थानबाट दायाँ, बायाँ भयो । अर्थात् बच्चाको टाउको आमाको दाहिने कोखातिर सर्यो ।
‘बच्चाले पोजिसन लियो । अब नर्मल डेलिभरी हुन्छ,’ नर्सले भने । तर, अमरलाई शंका लाग्यो । अमरले डाक्टरलाई श्रीमतीको अवस्था सुनाए । ‘म त अप्रेसनको डाक्टर हो । मैले केही गर्न मिल्दैन । यस्तो कुरा राउन्डको डाक्टरले हेर्नुहुन्छ,’ ती डाक्टरले भने । उनको जवाफ सुनेर अमर निराश भए र, राउन्डको डाक्टर पर्खिन थाले ।
परियार दम्पती अस्पताल आएको करिब ४० घण्टा भइसक्यो । नर्सहरू ‘नर्मल डेलिभरी हुन्छ’ भन्दैछन् । यता गर्भवतीको अवस्था ठीक छैन । रगत बगेको छ । वान्ता भएको छ । गर्भको बच्चाले कोल्टे फेरेको छ । गर्भवतीलाई श्वास फेर्न पनि मुश्किल भइसकेको छ । तर, पनि नर्स भन्छन्, ‘नर्मल डेलिभरी हुन्छ ।’ डाक्टर भन्छन्, ‘यो मैले हेर्ने होइन ।’
बिहान साढे ९ बजेतिर राउण्ड चेकअपमा डाक्टर आए । चेक, जाँच गरे ।
‘पेट ठूलो भएर बच्चाको धड्कन भेटिएन,’ राउण्डमा जाँच गर्न आएका डाक्टरले अमरलाई भने ।
यसको केही बेरपछि भूमिकालाई ‘लेवर रूम’ सुत्केरी गराउने कोठामा लगे । करिब साढे १० बजेतिर, आमा र बच्चाको लुगा मागे । डाक्टरले लुगा मागेपछि अमर खुशी भए । भगवानलाई धन्यवाद दिँदै, खुशी हुँदै अमरले आमा र बच्चाको लुगा दिए ।
२० मिनेटपछि डाक्टरले अमरलाई बोलाए र फेरि पनि बच्चाको धड्कन भेटिएन भने । त्यसपछि अमरले डाक्टरलाई भने, ‘उसलाई (भूमिका) केही नहोस् ।’ यस्ता प्रताडना सुनाइरहँदा अमरका आँखाभरि आँसुका थोपाहरू टिलपिलाएका थिए ।
एक घण्टापछि अर्थात् साढे ११ बजे डाक्टरले भने, ‘अप्रेसन गर्नुपर्छ ।’
अमरले पनि ‘हुन्छ’ भने ।
अप्रेसनपछि डाक्टरले भने, ‘बच्चाले आमाको पाठेघर फुटायो । पाठेघर फाल्नुपर्छ ।’
श्रीमतीलाई केही नहोस् भन्दै अमरले ‘हुन्छ’ भने । ‘अब उहाँ (भूमिका) बच्चा जन्माउन सक्नुहुन्न ।’ पाठेघर फाल्दा हुने असर सुनाए डाक्टरले । अमरले चुपचाप सहमतिमा टाउको हल्लाए ।
एकैछिनपछि अमरलाई डाक्टरले बोलाए, ‘बच्चा मृत भेटियो ।’
‘उसलाई कस्तो छ ? ऊ ठीक छ ?,’ अमरले बच्चाको परवाह नगरी सोधे । डाक्टरले बच्चाको आमाको अवस्था ठीक रहेको जवाफ दिए । त्यसपछि अमर निश्चिन्त भए, एउटा बच्चा छँदैछ, अहिले आमालाई केही हुनु हुँदैन भन्ने सोचेर ।
अप्रेसन गरियो । पाठेघर झिकेर फालियो । त्यसको ३ घण्टापछि आमालाई एमआईसीयूमा लगियो ।
यी सब भइरहँदा भूमिकाको पिसाब बन्द भएको रहेछ । आइतबार बिहान ५ बजेदेखि भूमिकाको पिसाब रोकिएको रहेछ ।
भूमिकाको पिसाब रोकिएको कुरा डाक्टरले सोमबार बिहान ३ बजे थाहा पाए । त्यसपछि उनलाई हतारहतार आकस्मिक कक्षमा लगियो । आकस्मिक कक्षमै सोमबार बित्यो । अवस्था सुधार भएन ।
जीवनका सबै खुशी एकैपटक छिनिएझैं लाग्यो अमरलाई । आँखा तिरमिराए । नियतिले अचानक अमरको जीवनमा कुदृष्टि पार्यो
आकस्मिक कक्षमा भूमिकाको अवस्था सुधार नभएपछि डाक्टरले मंगलबार बिहान ५ बजे भूमिकालाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने सुनाए । अमरले भेन्टिलेटरमा राख्ने सहमति दिए । पैसा पनि तिरे ।
आकस्मिक कक्षमै भूमिकालाई ८ पटक रगत पनि चढाइसकिएको थियो । तर, बिहान १० बजे अमरलाई बोलाएर भनियो, ‘यहाँ डाक्टर छैन । कि वीर अस्पताल लग्नुपर्छ, कि शिक्षण अस्पताल ।’
थापाथलीले थप उपचारका लागि ती दुई अस्पताल लैजाने सल्लाह दियो । अमर तयार भए । तर, वीर र शिक्षण अस्पतालमा बेड छैन भन्ने खबर आयो । अमर रन्थनिए । त्यसपछि उनले डाक्टरलाई सोधे, ‘के भएको हो ?’
डाक्टरले गोलमोल जवाफ दिए । जवाफको अन्त्यमा डाक्टर भन्थे, ‘आत्तिनु पर्दैन ठीक हुन्छ ।’
‘उपचार गर्न नसकेर अर्को अस्पताल लैजा भन्ने अनि आत्तिनु पर्दैन भन्ने ?,’ अमरलाई झोंक चल्यो ।
डाक्टरको जवाफभन्दा पहिले श्रीमतीका लागि अस्पताल खोज्नुपर्ने भयो । उनी अस्पतालको खोजीमा दौडिए । कसैले सुझायो, ‘सिनामंगल केएमसीमा उपचार हुन्छ ।’
बिरामी श्रीमतीलाई एम्बुलेन्समा राखेर अमर सिनामंगल पुगे । सिनामंगल पुगेपछि डाक्टरले भने, ‘स्थिति नाजुक छ । हामी केही भन्न सक्दैनौं ।’
डाक्टरको कुरा सुनेपछि अमर छाँगाबाट खसेजस्तै भए । आफू उभिएको जमिन भासिएजस्तै लाग्यो उनलाई । जीवनका सबै खुशी एकैपटक छिनिएझैं लाग्यो अमरलाई । आँखा तिरमिराए । नियतिले अचानक अमरको जीवनमा कुदृष्टि पार्यो ।
हिम्मत गरेर अस्पतालको कागजमा सही गरे । भूमिकालाई एमआईसीयूमा लगियो । कपनबाट छोरीलाई अस्पताल बोलाए । बुधबार डाक्टरले भने, ‘पिसाब रोकिएका कारण दुवै मिर्गौला खराब भएका छन् ।’
‘हे दैव !’ अमरको मुखबाट अचानक निस्क्यो । अमरको पीडा ख्यालै नगरी डाक्टरले भने, ‘पाठेघर फुटेर इन्फेक्सन पनि भएको छ । त्यसमाथि सुत्केरी अवस्थामा केही गर्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले अस्पतालमै सामान्य अब्जर्भेसनमा मात्रै राख्नुपर्छ । ६ हप्तापछि मात्रै के गर्ने कसो गर्ने थाहा हुन्छ । डायलासिस गर्नुपर्छ ।’
परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमनसहित अस्पताल गएका अमर अहिले परिवारकै सदस्य रहने हो कि नाइँ भन्ने पिरमा छन् । थापाथली अस्पतालको लापरबाहीका कारण आफूले बच्चा गुमाउनुपरेको उनको गुनासो छ । पीर छ । अस्पतालको लापरबाहीकै कारण आफ्नी श्रीमतीको ज्यान पनि खतरामा परेको उनको गुनासो छ ।
‘यही कारणले कुवेतको मेरो जागिर गयो’, अमर भन्छन्, ‘कमाएको पैसा पनि सकियो ।’ उपचारमा मात्रै अमरले ४ लाखभन्दा बढी खर्च गरिसके । सुत्केरी हुन अस्पताल गएको परियार दम्पती अहिले मानसिक र आर्थिक रूपमा अ–स्वस्थ बनेको छ ।
भदौ २० गते थापाथली अस्पतालको प्रतीक्षालयमा बसेकी श्रीमतीको तस्वीर देखाउँदै अमर भन्छन्, ‘यी हेर्नुहोस् त यति स्वस्थ्य थिई । अहिले त राम्रोसँग बोल्न पनि सक्दिन । स्वस्थ मान्छेलाई त्यो अस्पतालले...।’
डाक्टरका अनुसार अझै ३ हप्ता उनले अस्पताल बस्नुपर्नेछ । त्यसपछि पनि मिर्गौलाको उपचार सुरू हुनेछ । मृगौलाको उपचारमा कति समय लाग्ने हो उनलाई थाहा छैन । उनको एउटै कामना छ, ‘श्रीमतीलाई केही नहोस् !’
प्रकाशित मिति: आईतबार, असोज १२, २०७६, ०७:०६:००
सागर चन्द, पवन बराइली